Indlela kabusha izimbali
izitshalo potted njalo liwumhlobiso kangcono indawo. Futhi zidinga ukufakelwa gqwa. Bese kuba khona umbuzo kanjani kabusha izimbali. Ngaphambi kokuthi uqale, kudingeka silungiselele kahle njalo lapho lokhu. Akukona njengoba lula njengoba kungase kubonakale efika kuqala. Uma konke kuhamba kahle kusengaphambili ukuba silungiselele futhi ucabange yonke inqubo ye ukufakelwa wena kuzothatha isikhathi esincane kakhulu. Njenganoma yimuphi omunye ibhizinisi, ukufakelwa has umehluko wemisindo nemiqondo yamagama yayo ukucabangela, uma yebo ufuna isitshalo sakho wanamathela sokujabulisa kuwe ubuhle bayo.
Ngaphambi kanjani kabusha izimbali, udinga inhlabathi, okuzoba "baphile" imbali yakho. Lona omunye izigaba ezibalulekile kakhulu ukufakelwa. Kungakhathaliseki ukuthi ukhetha izwe kuncike kanjani imbali yakho izokwamukelwa endaweni entsha. Akubalulekile ukusebenzisa ezweni izivande noma zezimbali, njengoba zanqwabelana zonke izinhlobo Umanyolo, engesiyo ngempela nethonya elihle isitshalo sakho kuwo iminyaka eminingi. Uma unquma ukuthi ngeke sithenge ingxube ngomumo eyenziwe inhlabathi emnyama lithatheni ukufika eliseduze, kulesi simo, thatha ungqimba, okuyinto kahle ngezansi mkhawulo. Kuyinto ingasaphathwa microorganism ahlukahlukene, okuyinto kamuva angalimaza yakho uhlelo izitshalo impande.
Eyesibili, abekho ngaphansi impikiswano ebalulekile - kukhethwa isitshalo amabhodwe. Manje ezitolo ungakwazi ukuthenga ezihlukahlukene izimbiza ifomu, umbala izinto, okuyinto kungenziwa itshalwe izitshalo. Lapho ekhetha Kumele kukhunjulwe ukuthi akubona bonke izitshalo ukulingana elilodwa noma kwenye imbiza. Ngezinye izikhathi, ngenxa ekukhetheni okubi zalesi sihlahla uyafa.
Ngokuyinhloko, ukufakelwa houseplants, njengoba ngempela futhi bonke abanye, ekhiqizwa entwasahlobo. Kwakuphakathi nalesi sikhathi sonyaka zingabantu, ngomqondo ongokomfanekiso, vuka, futhi eziningi kuzo zingamaphayona isilungele zitshala futhi zezimbali. izitshalo Igumbi Ordinary zidluliselwa njalo ngonyaka, futhi uma umncane noma ngenkuthalo ukuqhakaza, kungenzeka futhi kaningi.
Ukuphendula umbuzo mayelana nendlela kabusha izimbali, kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi akunakwenzeka ukuba bahlanganyele ukudluliselwa ngokushesha nje lapho yabuna ngoba kungaholela ekufeni kwakhe. Ngemva izimbali, lesi sitshalo zibuthaka, futhi kule ndawo entsha kuyoba nzima ukujwayela. Futhi, ungakhohlwa ukuthi imbali kweqiniso ofuna kabusha lokho zilwane. Izitshalo uhlaza luningi ngezinye izikhathi kudinge Ukufakelwa kunamathuba amaningi okuthi kunezinye. Futhi zikhona nezinto okungafanele baphazamiseke iminyaka 2-3. Konke kuncike kanjani ngokushesha ukuthuthukisa uhlelo impande, futhi ngokushesha kangakanani izimpande ukugcwalisa imbiza. Njengoba izitshalo endlini kungaba ahlukahlukene ngempela, ukubanakekela iyadingeka futhi ehlukile.
Yonke inqubo ye zitshala izimbali kuthatha isikhathi esincane, futhi siqukethe izigaba eziningana.
Okokuqala, izimbali kumele uyophuziswa okungenani amahora amabili ngaphambi zitshala. Okulandelayo - ukulungiselela indawo ukusebenza, futhi konke okudingayo umsebenzi (imbiza, phansi, ummese, namalahle). On phansi imbiza wobulawa ungqimba ezimbili centimetric ngamatshe futhi ugcwalise zonke inhlabathi fresh ukuze slide waphenduka maphakathi. Kwaze kwaba yilapho sebeshiye yonke into isilungele, udinga ukuthola imbali kusukela imbiza ubudala (nge phansi), nivuthulule umhlaba ngokweqile, kancane kuhlanzwe izimpande. Ngaphambi shí umhlabathi entsha isitshalo, kubalulekile ukuba sihlole izimpande ngenxa khona izindawo ebolile noma ilimele futhi ngokucophelela usike kubo. Uma lezi azitholakali, ungafaka simila ebhodweni entsha futhi wambozwa inhlabathi. Ngesikhathi esigabeni sokugcina sithulula svezheposazhennoe isitshalo.
Indlela kabusha izimbali, manje sobala. Ngakho ukuthi le nqubo ngeke zibangele noma iyiphi nobunzima futhi ngeke kuphela zijabulise
Hydrangea: zinhlobo, izinhlobo, izithombe
Dogwood - ukutshala nokunakekela. Ukutshalwa futhi Lokusakaza dogwood. izakhiwo awusizo Cornel
Indlela ukucacisa yobudala ufudu umhlaba? ezimbili ezilula